Ọrụ nke Philanthropy na nchekwa nri na Africa - CAPSI
Ọrụ nke Philanthropy na nchekwa nri na Africa
Mkparịta ụka Society bụ usoro mkparịta ụka ọha na eze nke South Africa Trust kwadoro, na-achịkọta ndị na-etinye aka n'ime mmepe, azụmahịa na obodo ọha iji gwa, tinye aka na ịkekọrịta ahụmahụ n'etiti ọha mmadụ.
Na Nọvemba 4 2020 onye isi CAPSI kwadoro nkeji nkeji Prof. Bhekinknosi Moyo. Mkparịta ụka a gbadoro ụkwụ na iji philanthropy dị ka ngalaba na-enye aka, yana ịghọta usoro iwu isi akwadoro achọrọ maka SADC iji lebara mgbanwe ndị dị nso anya. Ndị na-akparịta ụka maka mkparịta ụka a bụ Evans Okinyi nke East Africa Philanthropy Network (EAPN), Mosun Layode nke African Philanthropy Forum (APF), Caesar Ngule nke Kenya Community Development Foundation (KCDF), Gima H. ​​Forje nke TY Danjuma Foundation.
Evans Okonyi kwuru maka ọrụ EAPN, ka ha siri lekwasị anya na mmepe na njikwa ihe ọmụma, ime njikọ na gburugburu ebe na-enye ohere maka ọrụ ebere na-aga nke ọma na East Africa. Ha na-agba mbọ ịnye ikpo okwu ebe ndị otu na ndị ọrụ enyemaka nwere ike izute, kesaa, hazie, na netwọkụ - ihe bara uru nke ukwuu n'oge ọrịa COVID-19.
N'ịbụ onye ya na ndị otu ahụ na-arụkọ ọrụ ọnụ, EAPN na-agbalị ịgbanwe mkparịta ụka ndị ahụ ka ọ bụrụ mmekọrịta bara uru, na-ejikọta gọọmentị na ndị ọrụ ebere iji dozie nsogbu nchekwa nri. Na-elekwa anya n'ụzọ ndị ọzọ nke ego maka oghere ndị dị na nchekwa nri, na-ejikọta ego sitere na ngalaba nkeonwe na nke gọọmentị na ndị ọrụ enyemaka.
Mosun Layode malitere site na ịtụgharị uche n'ọnwa iri gara aga, kpọmkwem ka kọntinenti Afrịka enwebeghị mmetụta ahụike siri ike site na ọrịa na-efe efe, dịka ndị mba ụwa buru amụma. N'ụzọ dị mwute, mmetụta akụ na ụba ekpughere adịghị ike nke usoro ahụike na nchekwa ọha. N'ịdabere kpamkpam na mbubata iji weta nri dị ka osikapa, Africa agaghị enwe ike inye ihe karịrị 25% nke ndị bi na 2025. Otu n'ime isi ihe ndị sitere na ogbako APF na nso nso a, bụ na n'ụzọ zuru oke, mmepụta nri. abawanyela, mana mmetụta ahụ anaghị enwe mmetụta n'ofe kọntinent ahụ. N'ileghachi anya na mmetụta nke mgbanwe ihu igwe na nchekwa nri, Mosun kwuru maka mkpa ọ dị itinye aka na ụlọ ọrụ dị mkpa, na-ebutekwa enyemaka enyemaka. Ịmepụta mmata n'okwu ndị a bụ ụzọ ndị ọrụ ebere nwere ike isi mee mgbanwe, ọkachasị na-enweta nkwado maka ndị ọrụ ugbo obere.
Ihe ọzọ na-adọrọ mmasị site na ogbako ahụ bụ mkpa ọ dị ịkwalite ọrụ ugbo n'Africa, karịa mmepụta nri - ileba anya na nkà na ụzụ, ngwá ọrụ, na ọzụzụ iji mee ka ala ubi na-emepụta nri zuru ezu iji zụọ ụwa, na-enye Africa ohere akụ na ụba. Ịdọta ndị na-eto eto, ndị na-enweghị ọrụ na ohere na ọrụ ugbo bụ ihe dị mkpa, na-enyere aka na nsogbu nke enweghị ọrụ.
N'ileghachi anya na nchekwa nri dịka ọ gbasara erighị ihe na-edozi ahụ, Mosun gosipụtara mkpa ọ dị ilekwasị anya na ụmụaka, na-enweta ha nkwado ha chọrọ maka ụbọchị 1 000 mbụ nke ndụ. O kwusiri ike na ọ dị mkpa ijikere maka ọrịa na-efe efe zuru ụwa ọnụ ma ọ bụ ihe ga-eme n'ọdịnihu, ka a ghara ijide onwe ya ọzọ.
Caesar Ngule leghachiri anya azụ ka nzaghachi ozugbo maka nchekwa nri na Kenya n'oge ọrịa na-efe efe si metụta ntinye nke ngwugwu nri - nke a ọ bụ ihe ngwọta na-adigide? KCDF tinyere nnukwu mbọ n'ịkwado ndị ọrụ ugbo obere na ndị na-eri nri, yana ileba anya na mgbochi amụma, dị ka ikike ala.
Gima H Forje kọwapụtara nzaghachi mbụ nke TY Danjuma Foundation maka ọrịa na-efe efe, nke kwuputara nke Siza - inyefe ngwugwu nri, ebe echiche ogologo oge na-enye ha ngwa na ihe ọmụma ka ha wee na-adigide onwe ha. O kwukwara banyere mkpofu nri n'oge mkpọchi, n'ihi mmachi na mmegharị - nri nwere ike inye ọtụtụ mmadụ nri. O kwuru maka ọtụtụ ụzọ a ga-esi akwado ndị ọrụ ugbo obere, yana mmemme inye nri ụlọ akwụkwọ.
Mosun kwuru maka akụrụngwa, yana otu mmekọrịta dị n'etiti gọọmentị na ọrụ enyemaka si dị iche site na mba ruo na mba. Ka ndị ọrụ enyemaka na-arụ ọrụ n'Africa, otu, gọọmentị, na atụmatụ ga-arụkọ ọrụ ọnụ iji nweta nsonaazụ. N'iji ihe atụ n'ime APF, o kwuru maka otu ha siri gosi otu dị iche iche n'Afrịka na-arụ ọrụ n'ihe gbasara nchekwa nri, na ogbako ha. Ha depụtara ha aha, họpụta ntuli aka wee wepụta otu ụlọ ọrụ, FarmGro Africa (si Kenya), bụ onye na-erite uru na ụgwọ ndebanye aha APF niile. Ihe a na-atụghị anya ya ka a na-aga n'ihu na oku na mmasị sitere na nnukwu ụlọ ọrụ na òtù dị iche iche na-achọ itinye aka na Nchedo Nri; jikọọ na òtù dị iche iche site na onye etiti a tụkwasịrị obi, dịka APF.
Evans depụtara isi ihe atọ dị mkpa maka ịtụgharị onyinye enyemaka ka ọ bụrụ atụmatụ ogologo oge:
A na-achọ nkwado ndị ọzọ maka ndị na-emepụta ihe oriri dị nta, na mpaghara ndị a: ụnwụ nri, nri, ihe ọmụma na ọrụ ego - ijikọta ihe ndị a na ahịa iji nweta ohere ndị sitere na ọnụ ahịa bara uru.
Na-arụ ọrụ n'ụzọ zuru oke, agaghịkwa na silos.
Melite mkpokọta, nchekwa, nyocha nke ịdị mma yana data ọrụ ugbo nwere ike ịnweta.
N'ịga na nzaghachi gaa na njikere, ekwesịrị ilekwasị anya na agụmakwụkwọ na ahụike. Ndị na-ahụ maka ọdịmma mmadụ nwere ike inye aka na digitize ụlọ akwụkwọ, kwalite akụrụngwa na ahụike, ọkachasị n'adọta na idobe ndị tozuru etozu.
Isi ihe ewepụtara na mkparịta ụka ahụ bụ:
Iji mee ihe na mgbanwe ihu igwe na Africa, ọ ghaghị ịdị mkpa, ya mere iweta nchekwa nri, nsogbu ozugbo, na-emesi mmekọrịta ya na mgbanwe ihu igwe ike, bụ ụzọ isi jikọọ ya.
Ihe data anakọtara n'oge ọrịa na-efe efe, kpọmkwem onye natara ihe, ebe, bụ usoro a ga-emerịrị - achọrọkwu data gbasara enyemaka enyemaka n'Africa.
Enwere nnukwu ohere na philanthropy maka mmepe teknụzụ, na-aga n'ihu na ebumnuche nke 60% nke ndị Africa jikọọ na netwọk mkpanaka, ka ọ na-erule 2025.
Enwere ohere dị ukwuu maka ịkwado nchekwa nri na-abụghị nke ọrụ enyemaka - nkwado obodo na usoro mgbọrọgwụ nwere ike itinye aka n'ime ụlọ na ijikwa mmemme ọrụ ugbo.
"Philanthropy bụ gluu na-ejikọta obodo anyị ọnụ ma na-egosipụta onwe ya n'ụdị dị iche iche."
E bipụtara akụkọ a na weebụsaịtị nchara nchara South Africa.
Ịnye Kisima na Ntorobịa na mkparịta ụka Philanthropy
Kpọọ maka Abstracts nyocha: Ọgbakọ Ọmụmụ Philanthropy Africa
Ọmụmụ ihe mmụta na usoro PhD